Warshadaha Qalabka Xiinka Warshadaha - Shiinaha Soosaarayaasha Qalabka Qalabka iyo Soosaarayaasha
Qalabka kala-baxa Ultrasonic
Qalabka kala-baxa Ultrasonic wuxuu ku habboon yahay noocyo kala duwan oo xalal ah, oo ay ku jiraan xalalka dareeraha sare. Awoodda caadiga ah waa min 1.5KW ilaa 3.0kw. Qaybaha ayaa loo kala firdhin karaa ilaa heerka nano.
sonicator processor-ka dareeraha ah
Sonicator processor-ka dareeraha ah ee Ultrasonic wuxuu leeyahay noocyo badan oo adeegsi ah, oo ay ku jiraan dardargelinta falgallada kiimikada iyo kicinta, unugyada lysis, kala firdhinta hore, isku duubnaanta, iyo yareynta cabirka. Sonicator-ka processor-ka dareeraha ah ee ultrasonic wuxuu ka kooban yahay baaritaan iyo koronto. Processor-ku wuxuu kaloo leeyahay rada taabashada ah, xusuusta barnaamijka la qaadan karo, garaacista iyo shaqeynta waqtiga, awooda fogaanta / deminta, ilaalinta culeyska, iyo shaashadda LCD oo muujineysa waqti dhaafay iyo soo-saarista awoodda. inaad la kulanto ...
Processor xoojinta sare, design dalab xirfadeed, qiimaha iibka macquulka ah, waqtiga dhalmada gaaban, ilaalinta ka dib iibka kaamil ah.